Quibi Mamela Episodes Horohoro vitsivitsy hikoriana ao amin'ny YouTube ho an'ny mpijery fahitalavitra
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Quibi Mamela Episodes Horohoro vitsivitsy hikoriana ao amin'ny YouTube ho an'ny mpijery fahitalavitra
by Timothy Rawles Aprily 30, 2020
by Timothy Rawles Aprily 30, 2020 1,085 hevitra
Vonona i Quibi hanidy ny tolotra tokana azy mandritra ny telo volana maimaim-poana fe-potoana fitsapana ary manome topimaso ireo mpamandrika ny votoatiny raha tsy mila misintona ny rindranasa izy ireo.
Ny valanaretina coronavirus dia mety nanakantsakana ny maodely finday Quibi izay niezaka ny hamoaka. Ny sehatra votoaty endrika fohy dia misy ny sasany amin'ireo anarana malaza be mpandray anjara ao Hollywood, fa amin'ny olona apetraka an-trano dia mety tsy dia liana tamin'ny mpamandrika ny lafiny azo zahana amin'ny serivisy.
Ny fanombohana dia namoaka fizarana Lalao mampidi-doza be indrindra, ny vahiny ary dummy ao amin'ny pejiny YouTube izay nampiasaina indrindra ho katalaogin'ny teaser sy tranofiara.
Na dia manana lohateny misy fizarana aza ilay sehatra, dia omeny ny mpijery fotsiny ny toko voalohany ary angatahiny izy ireo hisoratra anarana hahita ny ambiny.
Ireo mpankafy mampihoron-koditra dia mety te-hijery The Stranger, tafiditra ao amin'ny topy maso YouTube io.
Ity misy fihenan'ny tetika:
“Mpandeha mpamily tanora tsy mataho-tody no natsipy tao anaty nofy ratsy indrindra rehefa niditra tao anaty fiarany ny mpandeha Hollywood Hills tsy fantatra. Ny diany mampihoron-koditra mampihetsi-po miaraka amin'ny The Stranger dia miseho mandritra ny 12 ora mahatsiravina rehefa mizaha ny ambanin'ny vodilanidina ao Los Angeles izy amin'ny lalao saka sy totozy mangatsiaka. ”
koa Lalao mampidi-doza be indrindra mety hanintona ny fahaliananao:
"Manantena ny hikarakara ny vadiny bevohoka i Dodge Maynard, alohan'ny hahafatesan'ny aretina mahafaty azy, nanaiky tolotra handray anjara amin'ny lalao mahafaty i Dodge Maynard, ka hitany fa tsy mpihaza izy - fa ny rembiny."